TALOOYIN IYO WAANO KU SOCOTA SHACBIGA REER BARAAWE
Waxaan Awalan Shacbiga reer Baraawe u dirayaa salaan iyo duco. Anigoo hadda halkan ku heynin maqaal ama qoraal dheer waxaa lakiin aan aad iyo aad jecleystey oon u riyaaqey labada Qoraal oo aan Website ka Baraawepost ka aqristey oo ay qoreen Drssa. Isha Suldan Cumar Suldaan Faqi Xaji Awisa iyo Mudane Dr. Hassan Cabdow Munye.
Waa iska caadi Haddii Guriga ay ka wada maqanyihiin Aabihii iyo Hooyadii Ciyaalka Yac dhihii lahaa ay ka suurtowdo in ay waxey doonaan ku kacaan.
Waxaan aniga ogahay in Bulshaweynta Baraawe ay heystaan Dad aad wax u soo bartey oo la yaqaano Darajooyin iyo magac ku leh Bulshada Baraawe Gaar ahaan ama guud ahan Waddanka iyo Caalamkaba. Dadkaasi waxey bulshada ka filanaayeen in ay door weyn ka ciyaaraan hanashada ama ba ka dhex abuuraan bulshada reer Baraawe kalsoonidii ka luntey.
Anigoo dooneyn hadda in aan magacaabo odeyaashaas aan faraha lagu tirin karin ee wax u soo bartey in ay hoggaan u noqdaan Bulshadooda haddana ka maqan Doorkii laga rabey in ay ka ciyaaran Horumarinta Shacabka ayaa haddana waxaad mooddaa in laba ka mid ah dadkaasi ay hadda ka damqadeen waxa ka dhex guuxaya ciyaalkooda dhexdooda waa wax aad idinka kasbateen.
Waxaan Haddaba idin sheegayaa waa Odeyaasha iyo waxgaradka in ay hurdada ka toosaan oo hogaanka u qabtaan wiilashan tusiyana wadada toosan si loo helo berito rag iyo dumar idin bedela walaahi haddii kale halis baan ku suganahay.
Aawey saraakiisheenii Darajooyinka sare lahaa, Daqaatiirtii, siyasiyiintii, Duuliyeyaashii,Garsooreyaasha sharciga,Engineeradii, Maalqabeenadeenii Soomaliya Magaca ku lahaa ee ku abtirsada reer Baraawe. Inta dhimatey allaah ha u naxariistee intiina nool wax weyn baad ka beddeli kartaan Nolosha maanta ay ku jiraan mujtamaciina oo dhan walba leh Xagga siyaasadda, Dhaqaalaha iyo dhaqankaba oo cashuurtii iyaga laga qaadey aad wax ku soo barateen ma iska seexateen...maya maya ka kaca Hurdada ilaahey ha idin garabgalee anaga waa idin la jirnaa.
Waxaa Qorey : Hassan Ali Shegow